Le ODI icala intle kwihlabathi
Ke iNgilane lelona candelo lilungileyo le-ODI kwihlabathi. Babekhutshiwe iIndiya kancinci kodwa ngoku babuyile emfumba. Uhlobo lomdlalo weqakamba waseNgilane odlileyo bekumnandi, ukuquka ukuntywila kwama-5 ukuya kuma-5 kubantu base-Australia ngaphakathi 2018 eziquka amanqaku irekhodi ODI lehlabathi 481. Sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube khona. I-england ne-India zichanekile ngokuphumleyo, kodwa umdlali-we-England umdlali welinye icala. Nawuphi na umhlaba ODI 11 ngokuqinisekileyo inokuba nenani labadlali baseNgilani: Roy, IBairstow, ingcambu, UButtler kunye no-Stoke bonke banokukhwaza kakhulu, Ngelixa iingxilimbela zaseNgilani zinokuba ngumceli mngeni ngakumbi kwabanye ziyiiyunithi ezisebenza kakhulu ngaphandle konxibelelwano olubuthathaka.
Makhe bafumana phezu kwaye kusetyenzwe. Kwakukulinga kakhulu ukubhala into ngeloxesha, kodwa sizama nzima ukuhlala sijolise kwiziphumo zomdlalo. Zininzi iiposta eziza kufunyanwa apha. (1) Abantu base-Australia bakhunjuzwe ngokubaluleka komoya weqakamba kwaye banokuqalisa ukudlala nzima kodwa balungile njengecala labo elikhulu(s) we-90/00 yenza. (2) Abasemagunyeni bayikhuphe ngokufanelekileyo izohlwayo ezinzima ezithunyelwe ngomyalezo ocacileyo nocacileyo. (3) Abadlali ayingabo kuphela abantu ababanjelwe uxanduva: Ngokuchanekileyo inkcubeko enetyhefu kwiklasikhi yase-Australia yabonwa kwaye iintloko ze-Cricket Australia zaqengqeleka. Sivakalelwa kukuba mhlawumbi uSteve Smith wanikwa isohlwayo esiqatha kunokuba ayinyaniso ukuba iyinyani ayibandakanyi kucwangciso. Kwelinye icala, UDavid Warner unikwe amathuba amaninzi kakhulu, ukuba yayikuthi ngekhe iphinde idlale ikhilikithi yamanye amazwe.
Elinjani imbali elingathethekiyo kunye nomkhonzi omangalisayo womdlalo. Uya kuhlala ndandikulangazelela. phezu 12,000 ibaleka kwi-avareji ye 45 yirekhodi emnandi yayo nayiphi na into ebhexesha kule mihla, nangakumbi ibhetri yokuvula. Ongaqhelekanga 147 ibiyindawo yokugqibela efanelekileyo ye-legend yenyani yomdlalo.
Onjani topsy-turvy indebe yehlabathi iye yaba. INgilane ene-wobble kodwa emva kokugqiba yomelele. I-New Zealand iqala ngokuqina kodwa emva koko ikroba ukuya kumdlalo wokugqibela, emva koko ukuyigqiba ukuya kuthi ga ekugqibeleni. Iqela eliqhelekileyo lase-Australia libetha iNgilane kwinqanaba leqela kwaye phantse ligqiba ngaphezulu kweqela. I-Afghanistan ayiphumelelanga umdlalo kodwa ibibandakanyeke kwimidlalo emininzi esondele kakhulu nenomdla enike ukonwaba okukhulu nangaphezulu kokuzithethelela ngokubandakanywa kukhuphiswano.. IPakistan ilunge kakhulu kubo phantse ekubeni benze i-semi fainali baphulwe kumdlalo wokuqala yi-West Indies.